အရမ်းဆိုးတဲ့ မောင် – Grab Love Story
ဇော်ထွန်းနိုင်ဆိုတဲ့ကျနော်ကအခုတစ် ကောင်ကြွက်ဖြစ်နေပြီ။ငယ်ငယ်ကတည်းကအမေဆုံးတယ်။ကျောင်းပြီးတော့အဖေဆုံးပါးသွားပြန်တယ်။လူ့လောကအလယ်မှာတစ်ယောက်တည်းကျန်နေတယ်။ပျင်းရိစရာအရမ်းကောင်းတယ်။ဒါတောင်မှအဖေကနေစ ရာအခန်းလေးတခန်းပေးထားခဲ့ပြီးပညာ လေးတတ်အောင်ကျောင်းထားပေးခဲ့လို့ပါ။
ကျနော်မှာနေ ထိုင်ဖို့အိမ်ရှိတယ်။အဲဒီအတွက်စိတ်မပူရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငွေမရှိဘူး။ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်ရင်းကခင်ခင်ငြိမ်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးနှင့်တွေ့ကြတယ်။ခင်ခင်ငြိမ်းကလည်းနယ်ကပဲအဆောင်မှာနေရင်းအလုပ်လာလုပ်တာပါ။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ဖေးမကူညီကြရင်းနီးစပ်လာခဲ့တယ်။
ကုမ္ပဏီကCEOကလည်းသဘောကျတယ်။ရိုးသားတဲ့အပြင်လုပ်ငန်းစီစဉ်တာကောင်းမွန်တဲ့အတွက်သူ ဌေးကလည်းချစ်တယ်။အစကတော့ ကျနော်ခင် ခင်ငြိမ်းအပေါ်ရိုးရိုးသားသားပဲခင်တယ်။စနောက်တာတော့ရှိတယ်။ခင်ငြိမ်းလဲဒီလိုပဲနေမှာပါ။ဒါပေမယ့်ခင်ငြိမ်းကကျနော့်အတွက်ဆိုရင်စေတနာပိုပါတယ်။ယောက်ကျားလေးကတစ်ယောက်တည်းဘဝဆိုတော့ကောင်းကောင်းချက်မစားနိုင်ဖြစ်သလိုပဲချက်ပြုတ်စားသောက်တတ်တာ။သူကတော့သူ့ဘာသာချက်ပြုတ်စားတတ်တဲ့အတွက်အမြဲပဲကျနော့်အတွက်ဟင်းပိုထည့်ခဲ့တယ်။”ခင်ငြိမ်း ဘာချ က်လာသလဲ” ကိုဇော် ကရောဘာချက်လာသလဲ” “ကြက်ဥကြော်ပဲ” ထင်သားပဲ” အင်းလေငါလဲဒါပဲချက်တတ်တယ်” လာပါခင်ငြိမ်းမှာစုံတယ်၊ခင်ငြိမ်းအပိုချက်လာတယ်” ဟ့ခင်ငြိမ်းနင်ကကိုဇော့်အတွက်ပဲချက်လာသလား၊ငါတို့အတွက်မပါဘူးလား” CEOကလှမ်းစတယ်။ “အာဆရာကလည်းဆရာမှာကအစစအရာရာပြည့်စုံတယ်။
သမီးဟင်းဆရာဘယ်စားမလဲ””နင်ကမကျွေးချင်ရင်ဒီလိုပဲ””မဟုတ်ပါဘူးဆရာရယ်၊ဆရာစားချင်တာပြောခင်ငြိမ်းသေချာချက်လာပါ့မယ်””ဟားးးဟားးစတာပါခင်ငြိမ်းရာ၊ကိုဇော်ကိုပဲသေချာချက်ကျွေးလိုက်ပါ။ဒီကောင်ဟင်းကြည့်လိုက်ရင်ကြက်ဥကြော်ပဲ””ဟုတ်တယ်ဆရာရေ” “ကိုဇော် မင်းငါ့ဆီကဟင်းလာယူ၊မင်းအမလဲ မင်းအတွက်ပိုထည့်ပေးလိုက်တယ်””ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ” “ခင်ငြိမ်း နင်နှော်ငါမပြောမရှိနဲ့၊ကိုဇော်ကငါ တွေ့ဖူးတဲဝန်ထမ်းထဲမှာ တော်တဲ့လူထဲပါတယ်” “ဆရာကလည်းမြှောက်နေပြန်ပြီ””တကယ်ပြောတာ ၊ဥက္ကဌကလည်းမင်းကိုမျှော့်လင့်ချက်ထားတယ်ကွ” “ဆရာရယ် ကျတော်ကဘာကောင်မှမဟုတ်ပါဘူး” “မဟုတ်ဘူးကိုဇော်မင်းကရိုးသားတယ်ထက်မြက်တယ်၊ငါတို့ကုမ္ပဏီအတွက်အားကိုးရတယ်””ကျေးဇူးပါဆရာရေ” ကျနော်CEOဆီကဟင်းသွားယူတယ်။သူကလည်းပိုပိုသာသာထည့်ပေးတယ်။ကျနော်ခင်ငြိမ်းဆီပြန်လာပြီး “ခင်ငြိမ်းစားတော့မလား””စားမယ်လေကိုဇော်” “အင်းစားလေ”ထမင်းဘူးတွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ခင်ငြိမ်းကသူ့ထမင်းချိုင့်ထဲကဟင်းကိုကျနော့်ကိုအရင် ဦးချ ပြီး”ရော့ကိုဇော်စားလေ””စားပါ့မယ်ခင်ငြိမ်း “၊ခင်ငြိမ်းလဲစားလေ”ဟုတ်ကိုဇော်” ခင်ငြိမ်းဟာကျနော့်အပေါ်မှာအကိုကြီးတစ် ယောက်လိုတွယ်တာတယ်။ကျနော်လည်း ညီမတစ်ယောက်လိုခင်တယ်။
ဒီလောက်ပဲ လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး၊သဘောလည်း ကျပါတယ်။ခင်လေးရုပ်က အလှကြီးတော့မဟုတ် ပေမယ့်ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကမဆိုးဘူး။ ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။အနီးကပ်မြင်ရတဲ့ ကျနော်တစ်ခါတလေလည်းခင်ငြိမ်းကိုကြိုက်ရင်မဆိုးဘူးလို့တွေးမိတယ်။ခင်လေးဆီကရတဲ့ကိုယ်သင်းနံ့လေးတွေ ကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါလည်းရင်ခုန်တယ်။ကုမ္ပဏီကအကြိုအပို့ရှိတဲ့အတွက်ကားနှင့်အတူပြန်ရတယ်။အဲဒီအခါကျတော့လည်းခင်ငြိမ်းနှင့်ကျနော်ကပ်ပြီးထိုင်လေ့ရှိတယ်။နူးညံ့တဲ့သူ့ပေါင်လုံးအထိအတွေ့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါလည်း ငပဲကတောင်တယ်။တဖြေးဖြေးနှင့်ခင်ငြိမ်းကိုကျနော်ကြိုက်လာတယ်။ခင်ငြိမ်းလဲရိပ်မိလာတယ်။
ကျနော့်အပေါ် ကြင်ကြင်နာနာလုပ်ပေးနေတဲ့ ခင်လေးကိုကြည့်ပြီးကျနော်ချစ်မိသွားပြီလေ”ခင်ငြိမ်း” “ရှင်””ခင်ငြိမ်းကိုကျနော်ချစ်တယ်””ရှင် ကိုဇော်’” “ခင်ငြိမ်းကိုလက်ထပ်ပါရစေ””ကိုဇော်ရယ်” “ခင်ငြိမ်းရောကိုဇော့်ကိုချစ်တယ်မလား” “အာ…ကိုဇော်ကလည်း”ခင်ငြိမ်းသူ့လက်တွေကိုသာငုံကြည့်နေတယ်ကျနော်ခင်ငြိမ်းကိုလှမ်းဖက်လိုက်ပြီးနဖူးကို နမ်းလိုက်တယ်
ချစ်တယ်မလားခင်ငြိမ်း””အင်း ချစ်ပါသတဲ့ရှင်”ကျနော်ခင်ငြိမ်းပါးပြင်ကိုနေရာအနှံ့နမ်းလိုက်တော့တယ်။”ဟွန်း အရမ်းကဲတယ်””ချစ်လို့ကဲတာပါ” “ခစ် ခစ် ခစ်””ခင်ငြိမ်း ဒီနေ့မပြန်နဲ့တော့””အမ် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ””မောင့်ကိုပစ်ထားမှာလားခင်ငြိမ်း” “မောင်တဲ့လားရှင်””မောင်လို့ပဲခေါ်ပါအဲဒီအသံလေးကြားချင်လို့””ဟင်းနှော်တကယ်ဆို ကိုကိုလို့ပဲခေါ်ရမှာ” “မောင်ကအငယ်လုပ်ချင်လို့ပါ””သွား လူလည်ကြီး” “ခေါ်လေမောင်လို့””အင်းပါမောင်ရယ်ခင်ငြိမ်းမောင့်အတွက်စားစရာစီစဉ်လိုက်ဦးမယ်”ခင်ငြိမ်းထပြီးစားစရာစီစဉ်ပေးတယ်။သူစီစဉ်ပေးတဲ့စားစရာကိုကျနော်ကခွံ့ကျွေးခိုင်းတယ်”မောင်ကတကယ်ကလေးလေးလုပ်ချင်တာပေါ့” “အင်းလေ လက်ထပ်ပြီးကလေးမယူခင်ထိမောင်က ခလေးပဲ””ဟွန်း သိပ်ဆိုးတဲ့မောင်” အဲဒီနေ့ကခင်လေးအဆောင်မပြန်ပဲကျနော်ဆီမှာပဲအိပ်လိုက်တယ်။
ခင်ငြိမ်းကိုအရမ်းတွေ့ချင်တယ်။ခင်ငြိမ်းဆီကိုဖုန်းဆက်လိုက်တယ်”ခင်ငြိမ်း” “ပြောလေ ကိုဇော်””အာ ဘာကိုဇော်လဲ၊မောင်လို့ခေါ်လေ” “အာကိုဇော်ကလည်းလူတွေရှိတယ်””လက်ထပ်မယ့်လူတွေပဲကွာ ၊လူတွေသိလေပိုကောင်းလေပေါ့””ခစ် ခစ် ခစ်” “အရမ်းပိုတယ်နှော်””မပိုပါဘူးခင်ငြိမ်းရယ်မောင်လွမ်းလို့” “တော်ပြီကွာအလုပ်တွေရှိသေးတယ်””ခင်ငြိမ်းနှော်မောင် နေကောင်းလားတောင်မမေးဘူး””နေကောင်းသွားပြီပဲကို” “မကောင်းသေးဘူး ပြန်ဖြစ်နေပြီ””ဟယ်တကယ်လား” “လိမ်စရာလားခင်ငြိမ်းရာ””အင်းအဲဒါဆိုခင်ငြိမ်းရုံးဆင်းရင်လာခဲ့မယ်””အင်းမောင်မျှော်နေမှာ”ခင်ငြိမ်းကိုလိမ်ခေါ်လိုက်တယ်။ခင်ငြိမ်းညနေရောက်တော့ခင်ငြိမ်းရောက်လာတယ်။တံခါးထဖွင့်ပေးပြီးခင်လေးကိုအိပ်ခန်းထဲခေါ်ခဲ့တယ် “မောင်အပြင်မှာထိုင်မယ်လေ””မောင်မထိုင်ချင်ဘူးကွာ၊ထိုင်နေရာတာညောင်းလာပြီ””အင်းပါမောင်”ခင်ငြိမ်းကိုကုတင်ပေါ်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ခင်ငြိမ်းကိုဖက်ကာနမ်းလိုက်တယ်။ “နေမကောင်းဘူးဆို””ခင်ငြိမ်းနဲ့တွေ့တော့ပျောက်ပြီလေ” “ဟွန်းသိပ်တတ်တယ်””ချစ်လို့ပါခင်ငြိမ်းရယ်” ပြောရင်းနဲ့ခင်လေးနှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းလိုက်တယ် “ပြွတ် “”အွန်း အင်းဟင်းးး””မောင် မဆိုးနဲ့ကွာ” “ဆိုးမှာပဲ” ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်””အင်းးဟင်းးယားတယ်မောင်” ခင်ငြိမ်းမှာတပြောရင်းနှင့်ကိုကျနော်ခင်ငြိမ်းရဲ့လည်တိုင်ကျော့ရှင်းရှင်းလေးကိုစုပ်ယူလိုက်တယ်စတစနဲ့နယ်ကျော်လာတဲ့မောင့်ကြောင်ရင်တွေမောဟိုက်နေတယ်။မောင်ကခင်ငြိမ်း နောက်ကျောကိုအသေအချာပွတ်ပြီးနမ်း နေတော့အနမ်းမခံဖူးသေးတဲ့ခင်လေးရင်တွေခုန်ပြီးတုန်နေတာပေါ့။ကျနော်လည်းတစထက်တစပိုပြီးရဲတင်းလာတယ်။ခင်ငြိမ်းအင်္ကျီဇက်ကိုအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီးဘရာချိတ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်”မောင်တော်ပြီကွာမဆိုးနဲ့တော့” ခင်ငြိမ်းအကှင်္ီနောက်ကျောကိုအတင်းဖိပြီးတားမြစ်တယ်။
“အရမ်းချစ်တယ်ခင်ငြိမ်းရယ်”ကျနော်ခင်ငြိမ်းကိုအိပ်ရာပေါ်တွန်းလှဲလိုက်ပြီးခင်လေးအင်္ကျီကိုအပေါ်တွန်းတင်လိုက်တယ်။ခင်လေးရဲ့နို့စိုင်ထွားထွားတွေကလျှံထွက်လာတယ် “အိုးမောင်နှော်”ကျနော်ခင်လေးနို့တွေကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့လိုက်တယ်။နို့ဝန်းလေးတွေကိုငုံလိုက်ပြီးနိုးသီးခေါင်းပြူပြူလေးတွေကိုလျှာနှင့်ဝိုက်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါ”ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “”အာ့မောင်နှော်အင်းဟင်းးဟင်းး၊လွှတ်ပါမော င်ရယ်၊မကောင်းပါဘူးကွယ်””မရဘူးကွာဒီနေ့ချစ်မယ်ခင်ငြိမ်းအဆောင်မပြန်ရတော့ဘူး””မောင်ကလည်းကွာ ခင်ငြိမ်းတို့လက်မှတ်မထပ်ရသေးတဲ့ဟာကို” “မနက်ဖြန်ရုံးမှာပြောလိုက်မယ်။ဝါမဝင်ခင်လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်လိုက်မယ်လေ””အင်းလက် ထပ်ပြီးမှလေ””မရဘူးကွာ ဒီနေ့မောင်နှင့်အတူနေရမယ်”ခင်ငြိမ်းမောင့်ကိုမပြောတော့ပေ။ခင်ငြိမ်းလည်းမိန်းမသား၊ဆိပ်ကွယ်ရာမှာချစ်ရသူနှင့်အတူနေမယ်ဆိုတဲ့စကားကြားလိုက်တဲ့အခါခင်ငြိမ်းစိတ်တွေလဲယိမ်းယိုင်ခဲ့တယ်။ရင်တလှပ်လှပ်ခုန်ပြီးပိပိမှာစိုလာခဲ့တယ်။မောင်ကခင်ငြိမ်းနို့ကိုတလှည့်စီစို့ပေးတော့တချက်တချက်စိတ်က ထိန်းမရအောင် ဖြစ်လာကာမောင့် အလိုကျြ ဖစ်သွားရပြီ။မဖြစ်လို့ခံနိုင်ရိုးလားနို့ကိုစို့ပြီးစ ကပ်ကြားကတေလက်လျှိုသွင်းပြီးခင်ငြိမ်းရဲ့အဖုတ်ကိုအတွင်းခံပေါ်ကပွတ်ပေးနေတော့ခံလေးစိတ်တွေထိန်းမရနိုင်ဖြစ်သွားရတယ်။ကျနော်ခင်ငြိမ်းနို့တွေကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့နေသလိုကျနော်ရဲ့ငယ်ပါကမာပြီးခင်ငြိမ်းရဲ့ပေါင်ကိုထိုး မိနေတယ်လေ။ခင်ငြိမ်းရဲ့ပေါင်ကိုလျှာလာထိနေတဲ့မောင့်ရဲ့လီးကြောင့်ခင်ငြိမ်းရဲ့စိတ်ကိုလာဆွပေးနေတယ်။ခင်ငြိမ်းမှာတဖြေးဖြေးနှင့်အဖုတ်ထဲအရည်တွေစိုရွှဲလာပြီလေ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်””အာ့ အင်းဟင်းးဟင်းးးမောင်ရယ်” မောင့်ရဲ့နို့စို့ပြီးလိင်စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးမှု့ကြောင့်ခင်လေးမှာတဖြေးဖြေးနှင့်ညည်းတွားမိတယ်။
အတွင်းခံကြားထဲရောက်လာတဲ့လက်ကခင်ငြိမ်းရဲ့အဖုတ်အကွဲကြောင်းစမ်းပြီးကလော်ပေးတော့ခင်လေးရဲ့စောက်စိကာမဖူးလေးကို ထိပေးမှု့ကြောင့်ခင်ငြိမ်းမှာစိတ်ကတဖြေးဖြေးနှင့်စိတ်ပါလာပြီးမောင့်ရဲ့ကြင်နာမှု့ကိုသာလိုချင်သလိုဖြစ်နေပြီ။ ကျနော်လည်းခင်ငြိမ်းရဲ့အတွင်းခံကိုဆွဲချွတ်လိုက်တော့ခင်ငြိမ်းလဲသူ့ရဲ့ဖင်ကိုကြွပေးတယ်။ကျနော်လည်းခင်ငြိမ်းရဲ့ပေါင်ကြားကိုလှမ်းကြည့်တော့မို့ဖောင်းနေတဲ့ဆီးခုံမို့မို့လေးနှင့်စေ့ကပ်ပူးပြီးအရည်တွေထွက်နေတဲ့ပိပိနှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျနော်လည်းစိတ်ထဲအားမရဖြစ်လာပြီမို့ခင်ငြိမ်းရဲ့အဖုတ်ကိုလျှာအပြားလိုက်လုပ်ကာနမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။”အို့ မောင် အာ့၊မလုပ်နဲ့ မောင်” ကျနော်ခင်ငြိမ်းပြောစကားနားမထောင်ပါဘူး လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်တယ်။စိတ်ကလည်းထန်နေတာ့မို့ခင်ငြိမ်းရဲ့အဖုတ်ကိုဖိပြီးနမ်းလိုက်တယ်ခင်ငြိမ်းအရမ်းလန့်သွားတယ်။ထင်မထားတဲ့မောင့်ရဲ့အပြုအမူကြောင့်လေ။အဖုတ်ထဲတိုးဝင်လာတဲ့မောင့်ရဲ့လျှာကြီးကြောင့်တချက်တွန့်ကာတားမြစ်လိုက်ပေမယ့်မောင်ကဆက်ပြီး ယက်နေတာကြောင့်မောင့်ဆံပင်ကိုကိုင်ပြီး “မောင်အဲဒီလိုမလုပ်ပါနှင့်မောင်ရယ်” “ခင်ငြိမ်းရရ်မောင့်ကိုခွင့်ပြုပါကွယ်” “မရဘူးမောင်ဖုန်းကံတွေနိမ့်မယ်လေ” “ခင်ငြိမ်းရယ်မောင်ခင်ငြိမ်းဟာလေးမှဒီလိုမလုပ်ပေးရင်ခင်ငြိမ်းလုပ်ပေးတာမောင်ခံစားရတော့မလဲ”:မလုပ်နှင့်တော့လေမောင် ၊မောင်လုပ်စေချင်ရင်ခင်ငြိမ်းလုပ်ပေးပါ့မယ်” “တကယ်လားခင်ငြိမ်း””တကယ်ပါမောင်””အရမ်းချစ်တာပဲခင်ငြိမ်းရယ်””ခင်ငြိမ်းလည်းမောင့်ကိုချစ်လို့အရဲစွန့်လုပ် ပေးတာပါ”ခင်ငြိမ်းအပေါ်တက်ပြီးကျနော်ခင်ငြိမ်းနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်တယ်.””ပြွတ်”ခင်ငြိမ်းလည်းပြန်နမ်းလိုက်တယ်။မောင့်ကိုခင်ငြိမ်းအဖုတ်မယက်စေချင်ဘူး။
မောင်တစ် ယောက်ဖုန်းကံနိမ့်မှာမလိုလားဘူးလေကျနော်လည်းခင်ငြိမ်းကိုနမ်းပြီးတော့”ခင်ငြိမ်း မောင့်ဟာနမ်းပေးပါလား” “နမ်းပေးပါ့မယ်မောင်”ကျနော်ပက်လက်လှန်အိပ်လိုက်တယ်။ခင်ငြိမ်းလည်းကျနော့ဘေးထထိုင်ပြီးကျနော့်လီးကိုကိုင်ကာနမ်းကြည်ွပြီးမှစငုံလိုက်တယ်။”ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့ အိုးး အရမ်းကောင်းတယ်ခင်ငြိမ်းရယ်” ခင်ငြိမ်းကိုဒီလိုပဲပြောရမှာပဲတကယ်ကအဲဒီလောက်မကောင်းဘူး၊ခင်ငြိမ်းက လီးကိုစုပ်ရုံပဲစုပ်တတ်တယ်။ “အင်းအင်းးးဟင်းးးးရှီး”းခင်ငြိမ်းမောင်ကအရမ်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ကြိုးစားပြီးစုပ်နေရတာ။။မောင့်လီးကဟိုတနေ့ကနှင့်လုံဎဝမတူဘူး၊လီးကအရမ်းကြီးလာသလိုပိုလည်းရှည်တယ်။ကိုယ့်အဖုတ်တောင်ခံနိုင်မလားတွေးမိတယ်။တွေးရင်းနှင့်ပိပိထဲကအရည်စီးထွက်တယ်။ ခင်ငြိမ်းရဲ့အာငွေ့နှင့်လျှာရဲ့စုပ်အားကြောင်ွ့ကျနော့်လီးကမတရားတောင်လာတယ်။ အကြောတွေပျိုင်းပျိုင်းထနေတာ။ကျနော်ခင်ငြိမ်းခေါင်းကိုအသာလေးကိုင်ပြီးလီးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်လိုက်တယ်။ခသ်ငြိမ်းလုပ်ပေးတာနှင့်အားမရပါဘူး။နောက်မှတဖြေးဖြေးသင်ပေးရမှာပါ။လီးလည်းအဆမတန်တောင်နေပါပြီ။ခင်ငြိမ်းစောက်ဖုတ်ကိုလက်နှင့်နှိုက်လိုက်တယ်။စိုရွှဲနေတယ့်အဖုတ်ကိုတွေ့ပြီးလိုးရန်ဆုံးဖြတ်ကာ “ခင်ငြိမ်းမောင်လိုးတော့မယ်””ဟွန်းမောင်နှော်အပြောပက်စက်တယ်””ဟီးခင်ငြိမ်းကလဲကွာမောင်လိုးချင်အားကြီးပြီး ပြောမိတာပါ””အင်းပါမောင်”ခင်ငြိမ်းကကျနော်လိုးဖို့ရာအိပ်လိုက်ပြီးပေါင်ကားပေးတယ်။ကျနော်လည်းခင်ငြိမ်းပေါင်ကြားဒူးထောက်ကာလီးကိုစောက်ဖုတ်ဝတေ့ပြီးလိုးလိုက်တယ်”ဗျိ ဗျိ ဗြစ် ဗြစ် “ “အာ့မောင်ဖြေးဖြေးကွာအောင့်တယ်” အဖုတ်ဝကအရမ်းကိုကျဉ်းတယ်။
ကျနော်လီးမဆံ့မပြဲတိုးဝင်သွားတဲ့အတွက်ခင်ငြိမ်းလန့်ဖျန့်ကာတားလိုက်တာပါ” ကျနော်ဆက်ပြီးမသွင်းသေးဘဲခင်ငြိမ်းနို့ကို တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင်ကုန်းစို့ကာခင်ငြ်ိမ်းရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်တယ်။ ခင်ငြိမ်းလည်းမောင့်ကိုတားမရဘူးဆိုတာသိတယ်လေ။လီးကြီးကခင်ငြိမ်းအဖုတ်ထဲတိုးဝင်နေတယ်။ခင်ငြိမ်းအဖုတ်ကအတွင်းသားတွေလည်းလှုပ်နေပြီးမောင့်လီးကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ညှစ်မိနေတယ်။မောင်ကဆက်မသွင်းသေးပဲနို့တွေကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့နေပြန်ပြီ။နာကျင်မှု့တွေသက်သာလာပြီးမောင့်ရဲ့လီးကိုညှစ်နေတာကိုဖြေလျော့မိ တယ်။ဝေဒနာထက်ကာမအရသာထူးကိုတွေ့လာရတဲ့အတွက်အလိုလိုညည်းမိတယ်။ခင်ငြိမ်းဖီလ်းလင်ပြန်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တဝက်တပျက်ဝင်နေတဲ့လီးကိုဖြေးညင်းစွာထိုးသွင်းလိုက်တယ်။”ဗျစ် ဗျစ် ဖောက် “”အာ့ အိုး မောင်” ကျနော်သိပြီလေခင်ငြိမ်းရဲ့အပျိုမှေးကိုကျနော့်လီးကထိုးခွဲခဲ့ပြီခင်ငြိမ်းနာသွားမှန်းလဲသိတယ်။ဒီတော့ဆက်မလိုးပဲရပ်ကာနို့ကိုဆက်စို့ပေးလိုက်တယ်”မောင်ရယ်အရမ်းနာတယ်””ခနဆိုသက်သာသွားမှာပါ”ကျနော်နို့ကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့လိုက်တယ်။ခင်ငြိမ်းသက်သာလောက်ပြီဆိုမှ “ခင်ငြိမ်းမောင်ဆက်လုပ်မယ်နှော်””အင်းပါမောင်” ကျနော်ခါးမတ်လိုက်ကာခင်ငြိမ်းခါးကိုလှမ်းဆွဲပြီးတချက်ချင်းအဝင်အထွက်ကိုပုံမှန်လေး လုပ်လိုက်တယ်။လီးဒစ်ကခင်ငြိမ်းအဖုတ်ကို ပွတ်ဝင်ပွတ်ထွက်နှင့်ကြပ်တည်းစွာဝင်ထွက်နေတယ်။သွေးစသွေးနလေးနည်းနည်းပဲလီးရည်နှင့်စောက်ဖုတ်ရည်ကြားမှာတွေ့ရတယ်။ငါးမိနစ်လောက်ပဲလိုးရသေးတယ်။ခင်ငြိမ်းညည်းတွားသံထွက်လာတယ်”ဗျစ် ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဘွတ်””အင်းဟင်းးးဟင်းးအင်းးး””ဘွတ် ဖွတ် ဖန်းးဖန်းးးဖန်းးး””အာ့! အင့် !အင်းဟင်းးးမောင်ရယ်” ခင်ငြိမ်းညည်းတွားသံနှင့်အတူ အဖုတ်ထဲက ညှစ်လာတယ်။ခင်ငြိအယမ်းပြီးတော့မယ်ဆိုတာကျနော်သိလိုက်တယ်။
ကျနော်လည်းပြီးချင်နေပြီလေ။ဒီတော့လိုးတဲ့အရှိန်ထပ်မြှင့်ကာဆောင့်လိုက်တယ် “ဘွတ်! ဖွတ်! ဘွတ် ဖန်းးဖန်းးဖန်းး” “အာ့! အီးးရှီးးရှီးးးးအာ့ အင်းဟင်းးအားရှီးးး” ညည်းတွားသံပိုဆူလာပြီးခင်ငြိမ်းပိပိထဲကညှစ်အားလျော့ကာငြိမ်ကျသွားတော့တယ်။ကျနော်လည်းမာန်တင်းပြီးဆက်လိုးလိုက်တယ်။အချက်နှစ်ရာခန့်ဆောင့်ပြီးတော့ကျနော်လည်းသုတ်တွေပန်းထွက်သွားတော့တယ် “ခင်ငြိမ်းကောင်းလား””ဟွန်းဘာတွေလာမေးနေတာလဲ” “ကောင်းလားလို့””မသိဘူး နာနေတာပဲ””ဟားးးးး” ကျနော်ကခင်ငြိမ်းပါးပြင်ကိုနမ်းလိုက်ပြီးရယ်လိုက်ရာ “ဟွန်းသူကတော့ရယ်နေနိုင်တယ်၊ဒီမှာတော့ ကျိန်းစပ်နေပြီ””ခနနေသက်သာသွားမှာပါ” ထိုညကတစ်ချီပဲဆွဲလိုက်တယ်။ခင်ငြိမ်းအရမ်းနာကျင်ပြီးကြောက်သွားမှာစိုးလို့ပါ။ ဒီလိုနှင့်ခင်ငြိမ်းနှင့်ကျနော်ခြောက်လလောက်ရည်းစားဖြစ်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းလုပ်ဖြစ်တယ်။ခင်ငြိမ်းကိုလိင်ဆက်ဆံရာမှာမရှက်ဖို့သင်ပေးရင်းအဖုတ်ယက်ကိုခွင့်ပြုစေတယ်။တဖြေးဖြေးနှင့်ခင်ငြိမ်းလီးစုပ်ကျွမ်းကျင်လာယုံမကဖင်ပါလိုးခံတတ်လာတယ်။နောက်တော့ကျနော်တို့လက်ထက်ဖြစ်တယ်။လက်ထပ်ပြီးလေးလလောက်မှာခင်ငြိမ်းကိုယ်ဝန်ရလာတယ်။ကျနော်လည်းလက်ထပ်ပြီးတော့CEOကိုအလုပ်ကထွက်ခွင့်တောင်းတဲ့အခါ။CEO က ခွင့်မပြုဘူး။ဥက္ကဌနှင့်တိုင်ပင်ပြီး လုပ်ငန်းခွဲ တစ်ခုကိုအပြတ်ပေးတယ်။ကြိုတင်ငွေပါထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျနော့်လုပ်ငန်းကိုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ရတယ်။
သူစိမ်း‌ ယောင်္ကျား လီးကြီး